Fiteny indô-iraniana - Wikipedia
Ny fiteny indô-iraniana dia vondrom-piteny sampan' ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, izay ahitana ireo fiteny iraniana sy ireo fiteny indô-ariana ary ny fiteny noristany.
Faritra misy ny mpiteny indô-iraniana
1 Fiteny iranika
2 Fiteny indô-ariana
2.1 Ny fiteny hindostany
2.2 Ny fiteny bengaly
2.3 Ny fiteny penjaby
2.4 Ny fiteny maraty
2.5 Ny fiteny gojaraty
2.6 Ny fiteny orià
2.7 Ny fiteny sindy
2.8 Ny fiteny nepaley
2.9 Ny fiteny singaley
2.10 Ny fiteny seraiky
2.11 Ny fiteny asamey
3 Fiteny noristany
3.1 Fiteny noristany avaratra
3.2 Fiteny noristany atsimo
Ireto ireo fiteny iranika na iraniana: ny fiteny avestika, ny fiteny persiana taloha, ny fiteny iraniana antenantenany, ny fiteny persana vaovao, ny fiteny pastô (ao Afghanistàna), ny fiteny korda, ny fiteny balotsy, ny fiteny skitiana, ny fiteny sarmatiana ary ny fiteny ôseta. Ny toerana ahitana mpiteny iraniana dia tsy voafetran' ny tanin' ny Repoblika Islamikan' i Iràna fa mivelatra mankany amin' ny faritra Afovoany Atsinanana (ao amin' ireo faritra miteny korda ao Torkia sy Siria ary Iràka), ao Kaokazy (any Ôsetia sy ao amin' ireo faritra miteny tatô any Azerbaijàna), ary any Azia Afovoany (ao Iràna sy ao Afganistàna ary ao Pakistàna). Manampy azy ireo vahoaka mpifindra monina, indrindra ny Korda.
Ny fiteny zazaky dia fiteny tetenin'ny vahoaka zaza ao amin' ny faritr' i Dersim sy i Elâzığ ary i Diyarbakır ao Torkia. Isan' ny fiteny korda ny fiteny zazaky. Misy miteny azy koa ny ao amin' ny faritany sasany ao Kordistàna (ao atsimo).
Ny fiteny ôsetiana na ôseta dia tetenin' ny vahoaka ôsetiana (na ôseta) izay monina ao Kaokazy indrindra ao Ôsetia (Ôsetia Avaratra sy Ôsetia Atsimo) any Jeôrjia. Mizara roa ny fiteny ôsetiana, dia ny fiteny irôna izay fiteny ampiasaina amin' ny haisoratra, sy ny fiteny digôa izay tenenin' ny olona miisa 100 000 any ho any.
Ny fiteny lôry dia vondrom-piteny madinika ao tapany atsimo-andrefan' i Iràna izay tetenin' ny vahoaka lôry sy ny vahoaka baktiary izay monina ao amin' ny faritany iranianan' i Lorestan, Ilam, Chahar Mahaal sy Bakhtiari, Kohkiluyeh ary Buyer Ahmad, sy ao amin' ny faritra sasany ao Khuzestan.
Ny fiteny korda na kordy dia fiteny iraniana andrefana, tenenin' ny vahoaka korda (miia 44 000 000 any ho any) izay monina ao amin' ny faritra malalaka atao hoe Kordistàna, izay mizara amin' i Torkia afovoany sy atsinanana, ao amin' ny tapany avaratra-andrefan' i Iràna, ao Iràka atsimo ary ao Siria atsimo.
Ny fiteny farsy na persàna dia fiteny ôfisialin' i Iràna sy be mpiteny indrindra ao amin' io firenena io (ao afovoany, ao afovoany atsimo, ao avaratra atsinanana), ao Afganistàna ary ao Tajikistàna. Ahitana olona miteny azy koa ny ao Bareina, ny ao Katara, ny ao amin' ny Emirata Arabo Mitambatra. Endriky ny fiteny persàna isam-paritra koa ny fiteny dary (fiteny ôfisialy ao Afganistàna), ny fiteny tajiky (fiteny ôfisialin' i Tajikistàna) izay tenenina koa ao Kirgizistàna, ao Torkmenistàna, ao Ozbekistàna ary koa ao Kazakstàna. Ny fiteny dary dia endriky ny fiteny persàna (na farsy) teneina indrindraindrindra ao Afganistàna. Ny fiteny tajiky, na fiteny tôjiky, dia endriky ny fiteny persàna (na farsy) tenenina ao Tajikistàna.
Ny fiteny pastô dia fiteny iraniana atsinanana izay tetenina ao Afganistàna (isan' ny fiteny ôfisialin' io firenena io, manampy ny fiteny persàna sy ny fiteny dary) sy ao Pakistàna sady tetenin' ny olona miisa 45 000 00 any ho any.
Ny fiteny balotsy dia tetenina ao Balotsistàna. Ahitana olona miteny azy koa ny ao Torkmenistàna sy ny ao Ômàna. Fiteny lavidavitra ny fiteny farsy ny fiteny balotsy.
Ny fiteny gilaky dia fiteny ao amin' ny faritanin' i Gilan (na Guilan) ao Iràna. Akaiky dia akaiky ny fiteny mazandarany ny fiteny gilaky raha amin' ny lafiny voambolana fa akaiky ny fiteny zazaky amin' ny lafiny rafi-piteny. Miisa 3 600 000 any ho any ny mpiteny gilaky tamin' ny taona 1993.
Ny endri-piteny taty na azary dia fitambarana endri-piteny iraniana tetenina ao avaratra andrefan 'i Iràna. Isan' ireo fiteny iraniana avaratra-andrefana izy ireo. Ireo endri-piteny taty dia miparitaka amin' ireo faritra misy ny mpiteny azery ao Iràna.
Ny fiteny talisy dia fiteny tenenina ao Iràna, ao amin' ny faritra atsimon' ny ranomasina Kaspiana sy tenenin' ireo Talisy ao Azerbaijàna.
Ny fiteny mazandarany dia fiteny iraniana avaratra-andrefana tetenina ao Iràna ao amin' ny faritanin' i Mazanderan. Mitovitovy amin' ny fiteny gilaky ny fiteny mazandarany, indrindra raha ny voambolana no heverina. Nisy 3 000 000 eo ho eo ny mpiteny mazandarany manao azy ho fiteny nibeazana tamin' ny taona 1993.
Ireto ireo fiteny indô-ariana: ny fiteny sanskrita, ireo fiteny prakrita, ny fiteny hindy, ny fiteny ordò, ny fiteny bengaly, ny fiteny gojaraty, ireo fiteny indiana, ny fiteny nepaly, ny fiteny singaley, ireo fiteny darda (fiteny kasmiry, fiteny romany). Ao Azia Atsimo no tena ahitana olona maro miteny azy ireo: ao amin' ny roa ampahatelo avaratr' i India, ao Pakistàna, ao amin' ny tapany avaratra-atsinanan' i Afganistàna, ao Bangladesa, ao Nepaly, ao Srilanka ary ao Maldiva.
Ny fiteny hindostanyHanova
Miseho amin' ny endrika roa ny fiteny hindostany, dia ny fiteny hindy sy ny fiteny ordo. Ny fiteny hindỳ dia tenim-pirenen' i India. Amin' ny lafiny ofisialy, nampiasaina ho lingua franca any India ny fiteny hindỳ, kanefa 40 %n' ny olona fotsiny no mampiasa io fiteny io any India. Any avaratr'i India no misy ny ankabeazan'ny mpiteny hindỳ. Ny fiteny ordò dia fiteny any Pakistana sy any India, mitovitovy be amin' ny fiteny hindy izy fa soratana amin' ny abidy arabo. Betsaka ny teny indramin' ny fiteny ordò amin'ny fiteny persana sy fiteny arabo, ary nanampy feo vaovao ireo fiteny ireo tao anatin'ny rafi-peony.
Ny fiteny bengalyHanova
Ny fiteny penjabyHanova
Ny fiteny penjaby dia tenenina any amin' ny Faritra Punjab any Pakistàna sy any India. Io no fiteny be mpampiasa indrindra any Pakistàna ary fiteny faha-11 be mpampiasa indrindra any India. Ny fiteny penjaby dia ampiasain' ny olona miisa 80,5 tapitrisa ao Pakistàna (tamin' ny taona 2017). Ao Pakistana, ny fiteny penjaby dia soratana amin' ny abidy shahmukhi, mifototra amin' ny soratra persô-arabo; any India, dia soratana amin' ny abidy gurmukhi izy io, mifototra amin' ny soratra indika (na brahmika). Mifankalavitra be amin' ny fiteny hindy ny fiteny penjaby. Na izany aza, ny voambolana penjaby dia ahitana voanteny hindy na maro mifandraika amin' izany.
Ny fiteny maratyHanova
Ny fiteny maraty dia teny ampiasain' ny olona 75 tapitrisa ny olona any India, indrindra ao amin'ny fanjakan' i Maharashtra sy Goa. Ny fiteny maraty dia iray amin'ireo fiteny ôfisialy any India.
Ny fiteny gojaratyHanova
Ny fiteny gojaraty no fiten' ny tompontanin' i Gujarat. Misy olona 46 tapitrisa no miteny gojaraty any India sy maneran-tany.
Ny fiteny oriàHanova
Ny fiteny ôdià na fiteny ôrià dia ampiasaina ao amin' ny fanjakana indian' i Odisha. Io no fiteny ôfisialy ao Odisha, izay ampiasain' ny 82 % amin' ny mponina ao, ary ampiasaina any Bengal Andrefana sy Jharkhand ary Chhattisgarh. Iray amin' ireo fiteny ôfisialy maro ao India ny fiteny ôdià; io no fiteny ôfisialin' i Odisha ary fiteny ôfisialy faharoa any Jharkhand. Io fiteny io koa dia ampiasain' ny mponina be dia be miisa iray tapitrisa farafahakeliny ao Chhattisgarh. Araka ny fanisam-bahoaka tamin' ny taona 2011 dia ny fiteny ôdià no fitenin-drazan' ny Indiana miisa 37 521 324, ao anatin' izany ny 34 712 170 ao Odisha (izany hoe 92,5 % amin' ny mpiteny ary 82,7 % amin' ny mponina ao amin' io fanjakana io).
Ny fiteny sindyHanova
Ny fiteny sindý dia fiteny ao Sindy, ao Azia Atsimo, izay lasa faritanin' i Pakistàna, ampiasain' ny Pakstaney miisa 17 000 000 any ho any ary Indiana miisa 2 800 000 any ho any koa. Fiteny ofisialin' i Pakistàna sy India ny fiteny sindý. Azo soratana amin'ny tarehin-tsoratra arabo (avy amin' ny abidy arabo) na amin' ny devanagry ny fiteny sindý.
Ny fiteny nepaleyHanova
Ny fiteny nepaley dia anisan' ny fiteny manjaka any Nepaly. Voasokajy ao amin' ny fiteny Sinô-tibetana io fiteny io, fa soratana amin' ny fanoratana devanagary. Ny ankabeazan' ny olona miteny nepaley dia ny foko neoara, miaina ao amin' ny lohasahan' ny Katmandu, voanjadian' ny fiteny indô-eorôpeana io fiteny io na dia fiteny sinô-tibetana aza.
Ny fiteny singaleyHanova
Ny fiteny singaley dia fiteny ôfisialy any Sri Lanka satria maherin'ny 70 %n' ny olona mipetraka any no miteny singaley. Ny singaley dia fitenin' ny vahoaka sri-lankey any Azia Andrefana, an Aostralia, any Eorôpa (Angletera, Frantsa, Italia) ary any Amerika Avaratra, ny tontalin' ny mpiteny singaley dia 19 tapitrisa eo ho eo.
Ny fiteny seraikyHanova
Ny fiteny seraiky dia tenenina any amin' ny tapany atsimo-andrefan' ny faritanin' i Punjab ao Pakistàna. Ny fiteny seraiky indraindray dia heverina ho endrika fitenim-paritry ny fiteny ponjaby. Ny fiteny saraiky dia fitenin' ny olona miisa 25,9 tapitrisa ao Pakistàna, manomboka any amin' ny faritra atsimon' i Punjab, atsimon' i Khyber Pakhtunkhwa, ary faritra an-tsisintany any avaratr' i Sindh sy atsinanan' i Balochistan. Ny mpiteny saraiky no vondrom-poko ara-piteny fahefatra lehibe indrindra ao Pakistàna.
Ny fiteny asameyHanova
Ny fiteny asamey dia fiteny any amin' ny faritany mizakatenan' i Assam any amin' ny tapany avaratra atsinanan' i India, misy miteny io fiteny io koa any Arunachal Pradesh sy any amin' ny firenena hafa any avaratra-atsinanan' i India. Misy olona miteny asamey koa any Bhutan. Izy no tena atsinanana indrindra amin' ny fiteny indo-eorôpeana ary misy olona 13 tapitrisa no miteny io fiteny io. Manana fomba fanoratana azy manokana izy, ampiasaina matetika rehefa manoratra io fiteny io.
Ny fiteny noristany dia fiteny ireo dia tenenin' ny olona miisa 500 000 any ho any, indrindra ao Nuristan, any Afganistàna. Ny faritra onenan' ny vahoaka noristany dia ao amin' ny tapany atsimon' ny tendrombohitra Hindu Kush. Misy sokajy roa ny fiteny noristany, dia ny fiteny noristany avaratra sy ny fiteny noristany atsimo.
Ny fiteny noristany avaratra dia ahitana ny fiteny kamkata-vary (tenenin' ny olona miisa 40 000 any ho any ao Bashgali, miseho amin' ny endrika fitenim-paritra kata-vary sy kamviry ary momviry) sy ny fiteny vasi-vary na prasony (tenin' ny olona miisa 8 000 any ho any ao Prasuni).
Ny fiteny noristany atsimo dia mamondrona ny fiteny askono (tenenin' ny olona miisa 40 000 any ho any ao Ashkun), ny fiteny oaigaly (tenenin' ny olona miisa 12 000 any ho any ao Kalasha-ala), ny fiteny tregamy (Aampiasain' ny olona miisa 3 500 any ho any ao Gambiri) ary ny fiteny zemiaky (tenenin' ny olona 500 any ho any ao amin' ny faritanin' i Kunar).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_indô-iraniana&oldid=1045517"
Dernière modification le 3 Jiona 2022, à 10:40
Voaova farany tamin'ny 3 Jiona 2022 amin'ny 10:40 ity pejy ity.